Tumult Hype 2 yeOSX: Gadzira uye Ita Animate HTML5 | Martech Zone
Kumhanyisa Hype ndeye Mac OS X application iyo inokutendera iwe kuti ugadzire inopindirana zvemukati uye mifananidzo muHTML5 webhu zvemukati. Mapeji akavakwa neTumult Hype anoshanda pamatafura, mafoni uye iPads pasina kukodha kunodiwa. Unogona tenga kopi yeTumult Hype 2 kubva kuApp Store kusvika Sept 10th ye $ 29.99!
Iyo Hype (Mac OS X) vhezheni ine intuitive uye yekudyidzana maficha, kusanganisira:
Animations - Tumult Hype's keyframe-based animation system inounza zvirimo kuhupenyu. Dzvanya rekodhi uye Tumult Hype inotarisa yako yega kufamba, zvichingo gadzira keyframes pazvinenge zvichidikanwa. Kana, kana iwe ukasarudza kuve akawedzera maoko-on, nemaoko wedzera, bvisa, uye gadzirisazve mafomati emakiyi kuti unyatso gadzira zvemukati zvako. Zviri nyore kugadzira makwikwi echisikirwo nekudzvanya uye kudhonza munzira yechinhu chekuwedzera mabhezi control points
Mifananidzo Yekutaura Nguva - Nguva dzechiitiko dzinogona kuwedzerwa uye kutamba kana zvichikonzerwa nezviito. Uku kugona kunoita kuti iwe uwedzere kudyidzana - kukwidziridzwa pamusoro pechinhu kunogona kukonzera nguva yekutamba iyo inosimudzira zvimwe zvinhu zviri muchiitiko.
Tarisa zvimwe pane nguva.
Mifananidzo - Mifananidzo yakafanana nemasiraidhi mune software yekuratidzira, uye iri nzira huru yekurerutsa kuyerera kwehupenyu kana kupatsanura zvemukati. Tumult Hype inoita kuti iwe ugadzire zviitiko zvakawanda sezvazvinodiwa, uye zviito zvakasiyana zvinogona kuchinjika pakati pezviitiko uchishandisa shanduko yakatsetseka.
Yakagadziridzwa: Kutenda kunaWilliam Zima weBradenton.com nekujekesa kuti iri Mac OSX app, kwete iyo iOS app!
Tags: Appapurobudirirohtml5Hype mac os xiosMacOSXSoftwareyekufamba kwenguva
LinkedIn Inotangisa Inotsigirwa Dzidzo
Piqora: Rich Analytics yePinterest, Instagram uye Tumblr
William Nguva yechando
Aug 27, 2013 pa 10: 21 AM
Hype 2 ndeyeMac OS X, kwete iOS. Iko kune iOS shamwari app inoshanda nayo.
Aug 27, 2013 pa 10: 34 AM
Kutenda @wwinter: disqus! Ini ndakagadzirisa chinyorwa uye ndikawedzera yekutenda.